China Qalalan budada Electromagnetic kala-soocidda iyo alaab-qeybiyeyaasha |Huate
Wareegga magnetic wuxuu qaataa naqshadeynta jilitaanka kumbuyuutarka oo leh qaybinta dhul magnetic iyo saynis ah.
◆Labada daraf ee gariiradaha waxaa lagu duuduubay bir bir ah si kor loogu qaado isticmaalka tamarta magnetic iyo in la kordhiyo xoogga field magnetic ee aagga kala soocida in ka badan 8%, iyo asalka ah xoojinta field magnetic gaari kartaa 0.6T.
◆Qofka gariiradda kicinta waxay ku jiraan qaab-dhismeed gebi ahaanba xidhan, qoyaan, boodh iyo daxal, waxayna ka shaqayn karaan deegaanno adag.
◆Aqbalaada habka qaboojinta isku dhafka saliidda iyo biyaha.Gariiradaha xamaasadu waxay leeyihiin xawaare shucaac ah oo kuleyl ah, kor u kaca heerkulka hoose iyo hoos u dhigista kulaylka yar ee goobta magnetic
◆ Qaadashada matrix magnet-ka ah oo ka samaysan walxo gaar ah iyo qaabab kala duwan, oo leh jaangooyooyin weyn oo bir ah iyo saameyn wanaagsan oo ka saarista birta.
◆ Habka gariirku waxa lagu qaataa habka birta looga saaro iyo dheecaanka si looga hortago xannibaadda walxaha.
◆Material barrier waxaa lagu rakibay sanduuqa qaybinta alaabta si loo xalliyo qulqulka walxaha ku wareegsan saxanka daboolka si cad looga saaro birta.
◆Qofka golaha xakamaynta wuxuu ka samaysan yahay saxan bir ah oo tayo sare leh oo leh qaab dhismeed laba lakab ah.Waa mid aan boodhka lahayn oo aan biyuhu lahayn oo leh qiimaynta IP54.
◆Nidaamka kantaroolku waxa uu qaataa kantaroole programmable sida qaybta kontoroolka xudunta u ah si loo xakameeyo farsamaqa kasta oo dhaq-dhaqaaq ah si ay ugu socdaan si waafaqsan habka socodka socodka oo leh heer otomaatig ah oo sarreeya.
Hore: Flat Ring High Gradient Magnetic Separator
Xiga: MQY Buux-dhaafka Nooca Mill
Taxanaha YCMW Xoogaga Dhexdhexaadka ah ee Dabada garaaca wadnaha
Shaandheynta Vuum Disk ZPG